သဘာရင့်ဝါရင့် – မြန်မာသတင်းစုံ
“ဟူး..” ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကိုက်ခဲနေသဖြင့် တေဇာ မနည်း ထယူရသည်။ ညက အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သောက်တာ များသွားသည်။ အချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက်(၉)နာရီ ထိုးခါနီးနေပြီ။ ရုံးချိန်တော့ နောက်ကျတော့မှပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြသနာမရှိပါ။ သူတာဝန်ကျနေသေဲာမြို့လေးက မြို့ကြီးတွေလိုမှ မဟုတ်တာ။ တော်ရုံ နောက်ကျတာလောက်တော့ ကိစ္စမရှိ။ ရန်ကုန်မှာ နေစဉ်အပေါင်း အသင်းများပြီး လမ်းများသော သူ့ကို မိဘများက ခြေငြိမ်အောင် အလုပ်ထဲ ထည့်လိုက်မှ သူ ပိုလွှတ်လပ်နေသည်။ နယ်မှာ မိဘများနှင့် ဝေးရာနေရာမှာ တာဝန်ကျနေတော့ ပိုဆိုးသည်။ နေ့တိုင်းလိုမဟုတ်ပေမဲ့ ပုံမှန်လိုတော့ သောက်ဖြစ်သည် တာဝန်ကျနေသောရုံးမှာ လူပျိုလူလွှတ်က သူတစ်ယောက်ထဲပါသည်။ ဒီတော့မြို့ထဲမှ အခြားလူငယ်များနှင့် တွဲနေရသည်။ လူပျိုလိုင်းခန်းမှာ သူ့တစ်ယောက်ထဲ။ အိပ်ယာပေါ်တွင် ခဏလှဲနေလိုက်ပြီး မဖြစ်ဖူး ရေချိုးမှလို့ စဉ်းစားမိသည်။ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး ဘောင်းဘီတိုလေးဖြင့် အုတ်ကန်ထဲမှရေကို ခပ်ကာ လောင်းလိုက်သည်။ အား။ ရေက ဆောင်းရာသီမို့ထင် အေးစက်လှသည်။ ဟူး…ဒီမြို့လေးရဲ့ ရာသီဥတုကလည်း ကြမ်းတာကြောင့် သူ နေ့တိုင်း သောက်ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေစဉ်က ဆိုလျှင်တော့ သူဆော်တစ်ပွေ မဟုတ်တစ်ပွေနဲ့ နှပ်ကောင်းတုန်း နေမှာပဲ။
ဒါကိုစဉ်းစားမိလျှင် ဆော်မလုပ်ရတာကြာသော သူ့ငပဲကြီးကို ငုံ့ကြည့်မိသည်။ ဒီမှာက နယ်ကျဉ်းသည်။ ဆော်ဖန်ဖို့က မလွယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါက သူသေချာပေါက် ယူရမှာမို့ ဆော်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်နေရသည်။ ရုံးထဲမှာကလည်း အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားတွေရော အိမ်ထောင်သည်တွေကြီး။ သူနှင့် အဖွဲ့သိပ်မကျကြ။ နည်းနည်း အထီးကျန် နေသလိုလို။ “တေဇာလာပြီလား.ကိုယ့်ညီ.ညကအရှိန်များသွားတယ်ထင်တယ် ” မေးလိုက်သူ သူ့အထက်အရာရှိ ဦးအောင်မောင်း..။ အသက်က(၄၀)ခန့်ရှိပြီ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။ “ဟုတ်တယ်..ကိုကြီးရေ..ညကသောက်တာများသွားတယ်..” “အာ့ဆို မင်းခေါင်းတွေ ကိုက်နေမှာပဲ… ညကျရင် ကိုယ့်အိမ်ကိုလာခဲ့.. မနေ့က ကိုယ့်ညီကို စောင့်နေတာ မြို့ထဲက ကလေးတွေနဲ့ ပါသွားတယ်ဆိုလို့။ တစ်ယောက်ထဲကျတော့ သောက်ရမှာ ပျင်းတယ်ကွ ဟီးဟီး” ဦးအောင်မောင်းကား သူနဲ့တော်တော်ခင်သည်။ အသောက်သမားချင်းမို့ထင် ။ ဦးအောင်မောင်းကို မြင်လျှင် သူ ဒေါ်ရိုစီကိုပါ တွဲမြင်သည်။ ဒေါ်ရိုစီလို့သာ ပြောသာပါ။ ဦးအောင်မောင်းထက် အများကြီးငယ်သည်။ ရိုစီက (၃၀)လောက်ပဲ ရှိဦးမည်။ တေဇာတို့နှင့် (၅)နှစ်လောက်ပဲ ကြီးသည်။ ဦးအောင်မောင်းက အသက် (၃၅)နှစ်လောက်မှ သူ့မိဘတွေစီစဉ်သော ရိုစီနှင့် ယူခဲ့သည်။
ဦးအောင်မောင်းတို့မိဘတွေက တော်တော်ချမ်းသာသည်ဟု သိရသည်။ ဦးအောင်မောင်းသည်လည်း သူ့လိုငဆိုးပင်။ မိဘများက မနိုင်တာကြောင့် ၀န်ထမ်းဘ၀တွင်း သွတ်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ ဦးအောင်မောင်းကတော် ဒေါ်ရိုစီက တော်တော်လှသည့် မိန်းမများထဲတွင်ပါသည်။ အသားအရေက ဖြူနုနေပြီး အကျီလည်ပြတ်လေးများ ၀တ်ထားပါက လည်ပင်းမှ သွေးကြောစိမ်းလေးများပင် မြင်ရသည်။ ခါးကသိမ်သိမ် တင်က စွင့်ကားကားကြီးရယ်။ နို့ကလည်းကြီးသည်။ သူဆိုလျှင် ဒေါ်ရိုစီကို မကြည့်မိအောင် နေနေရသည်။ ဒေါ်ရိုစီကား ကျပ်သော အ၀တ်အစားများ၊ ကိုယ်လုံးအလှပေါ်စေသော အ၀တ်အစားများကိုသာ ၀တ်တတ်သဖြင့် သူ့စိတ်တွေက ဖောက်ပြန်လာတတ်လို့။ သူကလည်း ဆော်ဖင်တောင့်တောင့်မြင်လျှင် အသားစိမ်းနံ့ရသော ကျားလိုပင်။ သူ့ဒုတ်ကြီးက ထ ထ လာသဖြင့် ဒုက္ခရောက်သည်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက သူကလည်း မ ကျမ်းကျေသည့်နေရာမှ ဆရာတစ်ဆူ ဆိုတော့လေ။ သူ့စိတ်ကို မနည်းထိန်းထိန်းနေရသည်။ ဦးအောင်မောင်းနှင့် စကားပြောနေမှာပင်… “မောင်လေးရောက်လာပြီလား…အမကိုကွန်ပြူတာလေးရိုက်ပေးပါဦး” ဖိုင်များကိုင်ကာ သူ့အနားရောက်လာသော ဒေါ်သီရိမြတ်..။ ရုံးမှ ငွေစာရင်းကိုင်အမကြီး။ အသက်က (၃၅)ကျော်ကျော်… သူမယောင်္ကျားက တစ်ခြားနယ်မှာ တာဝန်ကျနေသော ၀န်ထမ်းတစ်ဦး။
ကလေးနှစ်ယောက်အမေဆိုပေမဲ့ ဒေါ်သီရိမြတ်ကား သူမကိုမသိလျှင် အပျိုလိုထင်ကြသည်။ သူမရုပ်ကလည်း ခပ်ချောချော။ အဓိကထင်ရှားသည်ကား ဖင်ကြီးတွေ။ ဝိုင်းစက်နေတာပဲ။ ကလေးအမေနှင့်ပင်မတူ…။ “ဟုတ် အမကျွန်တော်လာကြည့်ပေးပါ့မယ်” တေဇာအောင်ကား ဒေါ်သီရိမြတ်ကို လှမ်းပြောလိုက်ပြီး ဦးအောင်မောင်းကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး သူမရှိရာ ကွန်ပြူတာခန်းသို့ လိုက်သွားသည်။ ဒေါ်သီရိမြတ်က ကွန်ပြူတာ ရိုက်မည့်ထိုင်ခုံ၏ ဘေးထိုင်ခုံတွင် ၀င်ထိုင်နေသည်။ “မောင်လေး လာ…ဟင်း..ငါ့မောင်ပဲ အားကိုးစရာရှိတယ်.. ရုံးမှာကလည်း နင်ပဲကျွမ်းတာဆိုတော့” “ဟုတ်ပါပြီ..အမရယ်…ကိုယ့်အမကြီးပဲ ကူညီရမှာပေါ့… ကိုယ်ဖိရင်ဖိကို ကူညီဦးမယ်…” “ခ်ခ်..နင်ကတော့နောက်ပြီ…” ဒေါ်သီရိမြတ်ကား သူ့ကျောကို သူမလက်ဖြင့် မနာအောင်ပုတ်ရင်း လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒေါ်သီရိမြတ်ကို ဒီလိုပဲ စနောက်နေကျလေ။ သားပြော မယားပြောပြောပေမဲ့ စနေကျမို့လားမသိ။ သီရိမြတ်ကလည်း တေဇာအောင်ပြောတာကို သာယာနေတတ်သည်။ မသီရိမြတ်က တေဇာဘေးနားမှာနေပြီး စာရင်းများကို ဖတ်ပြနေသည်။ ခုနကပြောလိုက်သော ကိုယ်ဖိရင်ဖိဆိုသော စကားကိုသာယာနေသည်။ တေဇာအောင်ကလည်း သူ့ဘေးနားတွင် သီရိမြတ်ထိုင်ပြီး စာဖတ်ပြနေတာကို သာယာနေသလိုလို။ မသီရိမြတ်၏ ကိုယ်သင်းနံ့နှင့် သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းလေးက သူ့နှာခေါင်းကို ကလူကျီစယ်နေသည်။
“မောင်လေးစာနည်းနည်းမှားသွားပြီ…ဘယ်နေရာလဲအမ…” သူရုတ်တရက်မမြင်..သီရိမြတ်က သူမထိုင်ခုံမှထပြီး ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ကိုင်းကာ ကွန်ပြူတာပေါ်သို့ မှားသည့်နေရာအား လက်ညိုးထိုးပြလိုက်သည်။ နေရာအနေအထားက ကျဉ်းကျုပ်နေသဖြင့် ဒေါ်သီရိမြတ်၏ ရင်သားများက သူ့မျက်နှာနှင့် နီးကပ်စွာရှိနေသဖြင့်… သူ့ရင်တွေပင်ခုန်သွားသည်။ ဒေါ်သီရိမြတ်ကတော့ သူ့ဇောနှင့်သူမို့ သူမနို့တွေ တေဇာအောင် မျက်နှာနှင့်နီးကပ်စွာ ရှိသွားတာကို သတိမထားမိ။ “သြော်…တွေ့ပြီ..အမ..တွေ့ပြီ” တေဇာအောင်ကလည်း ဒီနေ့မှ အောက်ခံဘောင်းဘီက ၀တ်မလာမိ.။ ဒေါ်သီရိမြတ်၏ ကိုယ်သင်းနံ့များနှင့် သူမ၏အလှအပများကြောင့် သူ့လီးက တောင်လာဖြင့် ခြေကိုတစ်ဖက်ချိတ်ထိုင်ပြီး တောင်လာသော လီးကိုဒေါ်သီရိမြတ်မမြင်အောင် ဖုံးထားရသည်။ “ခဏစောင့်ဦးနော် မောင်လေး… နောက်စာရင်းစာရွက်တစ်ရွက် သွားယူဦးမည်” ဟုဆိုပြီး ဒေါ်သီရိမြတ်ကား အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ သူ့မျက်လုံးကလည်း ကိုယ်စောင့်နတ်က နိုးဆော်သည်ထင်… ဒေါ်သီရိမြတ်၏ နောက်ပိုင်းအလှကို လိုက်ကြည့်မိသည်။ လှမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တုံခါပြီး နှိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေသော ဒေါ်သီရိမြတ်၏ အိုးကြီးကိုကြည့်ပြီး တတွေးတနင်နင်ဖြစ်လာသဖြင့် ရေဗူးကိုယူပြီး သောက်လိုက်ရသည်။
နည်းတဲ့ အိုးကြီးမဟုတ်ဖူးကွာ… သူ့ယောင်္ကျားနှင့် ဝေးနေတာကြာလို့လည်း ဖြစ်မည်ထင်တယ်ဟု သူတွေးမိသည်။ ဒီလို အမကြီးမျိုးနဲ့သာ အတူအိပ်လိုက်ရလို့တော့ကွာ ဟုစဉ်းစားမိတာနဲ့ သူ့ရမ္မက်စိတ်တွေအရမ်းကြွလာသလိုခံစားရသည်။ သူဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့အကြုံအရ ဒေါ်သီရိမြတ်ကားလည်း တော်တော်ထန်မည့် မိန်းမပုံစံမျိုးပင်။ ရုံးထဲကဖြစ်နေလို့ သူတွေးတိုးမစမ်းချင်။ ရန်ကုန်မှာလိုဆိုရင်တော့ သူစဉ်းစားစရာမလို… သူကျင်လည်ကျက်စားရာ ဒေသပေကိုး။ ဒေါ်သီရိမြတ်ကား စားပွဲပေါ်မှ ဖိုင်တွဲကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ဒီစာတွေကို သူမကိုယ်တိုင်ရိုက်လည်းရသည်။ တေဇာအောင်ကို အကူအညီတောင်းခြင်းမှာ သူမကိုယ်တိုင်က တေဇာအောင်နှင့် နီးကပ်စွာ နေချင်တာလည်း ပါသည်။ သူမအနေဖြင့်လည်း ယောင်္ကျားနှင့် ဝေးနေတာကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် ဆာနေသည်။ တေဇာအောင်ကား သူမလိုချင်သော အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တေဇာအောင် ရှေ့လှမ်းလျှောက်ပြီး သူမဖင်ကြီးတွေကို မမြင်မြင်အောင် လမ်းလျှောက်ပြသည်။ ထိုသို့လုပ်သော အခါတွင် တေဇာအောင် မျက်လုံးကြိးတွေက သူမဖင်ကြီးကို ကြည့်ကြည့်နေတာ သူမသိသားပဲ။ အသာလေး မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတာ။ ခုနက ကွန်ပြူတာက စာအမှားကို သက်သက်ကို မတ်တပ်ရပ်ပြပြီး သူမရင်ညွှန့်တွေနဲ့ တေဇာအောင်မျက်နှာကို မထိတထိပွတ်လိုက်တာကို တေဇာအောင်မသိ။
တေဇာအောင်ကား မျက်နှာကိုရဲနေတာပဲ။ သူဒီနေ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ၀တ်လာဟန်မတူ.။ ဒုတ်ကြီးက ပုဆိုးအောက်မှာ မာထောင်နေတာကို သူမသတိထားမိသည်။ သူမသတိ မထားမိအောင် တမင်ခြေချိတ်ပြီးထိုင်ကာ ပုဆိုးဖြင့် ဖုံးထားသော်လည်း တေဇာအောင် ဒုတ်ကြီး ပုဆိုးအရွေ့တွင် အနည်းငယ်ယမ်းသွားတာကို သတိထားမိသည်။ နည်းတဲ့ဒုတ်ကြီးမဟုတ်ဖူး…. ကောင်လေးပုံစံကြည့်ရတာလဲ အတွေ့အကြုံတော့ ရှိပုံပင်.။ တေဇာအောင်ရောက်ကတည်းက သူမသတိထားမိသည်။ ရုပ်ကလည်း ဖြောင့်သည်.။ အားကစားလိုက်စားသဖြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း တောင့်တင်းလှသဖြင့် သူမသဘောကျသည်။ ဒါကြောင့်မို့ ရမယ်ရှာပြီး တေဇာအောင်ကို သူမကို စိတ်ကစားသထက်ကစားပြီး ကြံစည်လာအောင် မသိမသာ ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရရင် သီရိမြတ်ကား ရမ္မက်ကြီးသော မိန်းမတစ်ယောက်။ ကလေးတွေကို မိဘအိမ်မှာထားပြီး ရုံးသို့လာလျှင် အပျိုးရှုံးလောက်အောင် ကျော့မော့နေအောင် ပြင်တတ်သည်။ တေဇာအောင်နားမှ သူမထွက်လာစဉ် တေဇာအောင်ကား သူမဖင်ကြီးကို တောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေတာကို သူမ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားသည်။ ဟူး… သူမလိုနေသော ရမ္မက်ကို တေဇာအောင်က ကောင်းကောင်းဖြည့်ပေးနိုင်တာ သေချာသည်.။ အပြင်မှာ လင်ငယ်နေလျှင် နာမည်ပျက်သည်.. လူသိသည်။
ဒီထဲမှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ လူမသိအောင် ဖန်တီးယူရမည်.ဟုစဉ်းစားလိုက်ပြီး တေဇာအောင်ရိုက်ရန် စာရွက်စာတမ်းများကို ကွန်ပြူတာခန်းဘက်သို့ သူမယူဆောင်လာခဲ့တော့သည် အား… တေဇာအောင်ကား အနည်းငယ်ညောင်းသွားသဖြင့် အညောင်းဆန့်လိုက်သည်။ စာရိုက်ရတာ များသဖြင့် မျက်လုံးများနည်းနည်းအောင့်လာသည်။ “အို..ငါ့မောင်လေးပင်ပန်းသွားပြီ… ငါ့မောင်ကို နှိပ်ပေးရဦးမယ်..ဟင်းဟင်း” ဒေါ်သီရိမြတ်ကား တေဇာအောင် ကျောနှင့် ဂုတ်များကို လက်ဖြင့်ဖွဖွနှိပ်လိုက်သည်..။ တေဇာအောင်ကား ဒေါ်သီရိမြတ်၏ လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးများဖြင့် နှိပ်တာကို သဘောကျနေသည်။ “ငါ့မောင်ကို.တစ်ခုမေးရဦးမယ်…” “ဘာလဲ..အမ…မေးလေ..” “ငါ့မောင်ရည်းစားရှိလား.. အမလေးအမရယ်.. မေးမှမေးတတ်ပလေ…ရှိမှတော့ ဒီလိုနေပါ့မလား” ခ်ခ်..ငါ့မောင်ကညံ့တာကိုးကွဲ့.” ဒေါ်သီရိမြတ်က သူ့နောက်မှာမတ်တပ်ရပ်နှိပ်ရင်း တေဇာအောင် အင်္ကျီကြားကို လက်နှိုက်ကာ တေဇာအောင် ရင်အုံကိုလက်များဖြင့် ပွတ်ပေးနေသည်။ ယောင်္ကျားကြောသိသော ဒေါ်သီရိမြတ်အနေဖြင့် ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အကြောကိုကောင်းကောင်းသိသည်။ တေဇာအောင်ကို သူမကစသလိုနောက်သလိုဖြင့် ဒီလိုပွတ်နေကျ.။ “ငါ့အမကြီးကတော့ လုပ်ပြိ..အဟဲ…” တေဇာအောင်ကလည်းစသလိုနောက်သလိုဖြင့်..။
“နေဦး..ငါ့အမကြီးကို မောင်လေး မဖက်ရတာကြာပြီ.. ဟင်းဟင်း” ဟုဆိုပြီး ဒေါ်သီရိမြတ်ခါးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်သီရိမြတ်ကို ဒီလိုပဲ.. ကိုယ့်အမအရင်းလို သဘောထားသလိုလိုနဲ့ ညာတာပါတေးနဲ့ခါးတို့ ပုခုံးတို့ကို ဖက်နေကျပါ… တေဇာအောင်က။ ဒေါ်သီရိမြတ်ကလည်း မငြင်းပါဘူး။ တေဇာအောင်ထိုင်ခုံလက်တန်းမှာ တစ်စောင်းဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ စွင့်ကားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေဟာ ခုံလက်တန်းမှာ ပြန့်ကားနေပါတယ်။ “ဟိုလေ..ငါ့အမကြီးကိုကိုရော ပြန်မလာသေးဘူးလား” “ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်လေးရဲ့..” “ငါ့အမကြီး..ကိုကိုပြန်လာရင် ငါ့အမကြီးကို မတွေ့ရတာကြာတာနဲ့လေ..” “ခ်ခ်.. နင်ဟယ်နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့..” ဒေါ်သီရိမြတ်ကတေဇာအောင်ပုခုံးကို သူမလက်တင်လိုက်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်.။ တစ်ခစ်ခစ်၊ တဟားဟားရယ်သံတွေက အခန်းထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ မသီရိမြတ်၏ စာများကို တေဇာအောင်ရိုက်ပေးရင်းနဲ့ ညနေ(၅)နာရီထိုးသွားသည်။ မသီရိမြတ်ကား သူ့အနားမှထ၍ ဖိုင်များကို သွားသိမ်းနေချိန်တွင် သူလည်း ကွန်ပြူတာကိုပိတ်ပြီး သူ့စားပွဲရှိရာကို ပြန်လာခဲ့သည်။ သူ့ပစ္စည်းများကို သိမ်း၍ ဆိုင်ကယ်ရှိရာသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ “ကိုတေဇာအောင်…ပြန်တော့မလို့လား..” ရုံးမှ စာရေးမလေး ဖြိုးဖြိုးလှိုင်။
“ဟုတ်တယ် ညီမလေး မသီရိမြတ်စာတွေ ရိုက်ပေးနေတာနဲ့ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်..” “သြော်…. ဟင်း..ကိုတေဇာကြီးနော်.. မသီရိမြတ်စာတော့ ကူရိုက်ပေးတယ်.. သမီးတို့စာကျတော့ ကူရိုက်မပေးဘူး.. မျက်နှာလိုက်တယ်” ဖြိုးဖြိုးလှိုင်က မျက်စောင်းလေးထိုးရင်း သူ့ကိုခနဲ့လိုက်ပါတယ်.။ “အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့ ဖြိုးဖြိုးလှိုင်ရယ် နင်တို့လည်း အကူအညီတောင်းရင် ကူညီမှာပေါ့” “ဟုတ်ပါပြီ..ကိုတေဇာရယ်…ခ်ခ်..သမီးကစတာပါ” ဖြိုးဖြိုးလှိုင်က ရယ်ပြီးလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ မသီရိမြတ်ကရုံးထဲကနေ ကပျာကယာ အနေအထားနဲ့ထွက်လာပါတယ်.။ “မောင်လေး..တေဇာ အမကိုလိုက်ပို့ဦး… ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်မပါလို့..” “ဟုတ်…ဟုတ်..အမ..” “ကဲ..အဲ့ဒါဆို သမီးပြန်တော့မယ်…ဟိုမှာ ကိုတေဇာ ချစ်အမကြီးလာနေပြီ..ခ်ခ်” ဖြိုးဖြိုးလှိုင်ကား အနှောင့်အသွားမလွတ်သော စကားကိုပြောကာ သူမဆိုင်ကယ်ကိုစက်နှိုးပြီး မောင်းထွက်သွားချေပြီ။ မသီရိမြတ်ကား သူ့အနားသို့ ရောက်လာသည်။ “ဆိုင်ကယ်မပါခဲ့လို့ မောင်လေးရေ…ဒီနေ့မှ..” သီရိမြတ်ကား ဆိုင်ကယ်ပေါ်လှမ်းတက်ပြီး တေဇာအောင်ခါးကို ဖက်လိုက်သည်။ တေဇာအောင်က ဆိုင်ကယ်ကိုစက်နှိုးကာ မသီရိမြတ် ပြန်မည့်လမ်းအတိုင်း မောင်းခဲ့တော့သည်။ ညနေခင်းလူရှုပ်ထွေးချိန်မို့ လမ်းပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေရှုပ်နေသဖြင့် ဘရိပ်ခဏခဏဆွဲနေရသည်။
ထိုသို့ဆွဲလိုက်ချိန်တွင် မသီရိမြတ်ကိုယ်က သူ့ရှေ့သို့ယိုင်ယိုင်လာပြီး သူမနို့တွေက သူ့ကျောပေါ်ကို အပြားလိုက်ကြီး ထိထိမိမိကြီးကို ဖိကပ်သွားသလို. သူမတင်ပါးအိအိကြီးများကလည်း တစ်လမ်းလုံး ထိနေတာကြောင့် တေဇာအောင် ကြွလာတဲ့စိတ်ကို မနည်းထိန်းနေရပါတယ်။ တေဇာအောင်က ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်လိုက်သည်…။ သူရောက်နေသော နေရာကား မသီရိမြတ်တို့ အိမ်ရှေ့မှာ။ မသီရိမြတ်တို့အိမ်ကား ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်ထဲရှိ နှစ်ထပ်တိုက်သစ်တစ်လုံး ဖြစ်သည်။ တိုက်တစ်ခုလုံးကို ဆေးအစိမ်းနုရောင်တွေ သုတ်ထားသည်။ လူနေအိမ်ခြေများကလည်း ကျဲပါးသည့်ရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်နေသည်။ “ဟင်..” မသီရိမြတ်က ခြံရှေ့တံခါးကို သော့ခတ်ထားတာမြင်သဖြင့် “နေဦးနော်..မောင်လေး..အမအိမ်က အမအဖေအမေနဲ့ကလေးတွေ ဘယ်သွားကျလဲမသိဘူး.. ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးမယ်..” မသီရိမြတ်က ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်သည်.. “ဟဲလို..အမေလား..သမီးပါ..သီရိ….. သြော်.. ဟုတ်လား..အမေ.ဒါဆိုလဲ အေးဆေးမှပြန်ခဲ့ပါ.. အင်း.. အင်း..ဒါပဲနော်မေမေ..” သီရိမြတ်က ဖုန်းကိုချပြီး တေဇာအောင်ဘက်လှည့်လိုက်သည်။ “တေဇာရေ…တေဇာ့ကို အမအကူအညီ တောင်းစရာရှိလို့..” “ပြောလေ..အမ” “တေဇာအပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်.. အမကို အိမ်ခဏကူစောင့်ပေးပါလား အမတို့အိမ်က လူတွေအားလုံးက ဦးလေးနေမကောင်းလို့တဲ့ ဥိးလေးအိမ်သွားကြတယ်.. မနက်ကျမှ ပြန်လာကြမယ်တဲ့.. ။
အဲ့ဒါလေ..အမတို့အိမ်နေရာက ရပ်ကွက်ကလည်း လူရှင်းတော့… အမကို ဒီတစ်ညလောက် ကူစောင့်ပေးပါလားဟင်” တေဇာအောင် နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်သည်..။ ဒီနေ့ည ဦးအောင်မောင်းနှင့်လည်း သောက်ရန်ချိန်းထားသေးသည်။ ဒါက ဖျက်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက မသီရိမြတ်အတွက်… အိမ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ စောင့်ရမည်ဆိုတော့..။ “ဟို..လေ..အမဖြစ်ပါ့မလား အမကို လူပြောစရာများ ဖြစ်နေမလား” “ငါ့မောင်ကလည်း..အမကိုမကူညီချင်လို့လား..” မသီရိမြတ်ကလည်း မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ဖြစ်နေတော့ သူကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ “ဒီ..ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး..အမ.. ကူညီပါ့မယ် ဒါဆိုကျွန်တော့် အဆောင်ပြန်ပြီး အ၀တ်လေးတွေ သွားယူလိုက်ဦးမယ်” “နင်ကလည်း ယူမနေနဲ့.. ငါ့ယောင်္ကျးအ၀တ်တွေရှိတယ်.. ယူဝတ်လိုက်.. နင်နဲ့အတူတူပဲ.. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က” သို့နှင့်တေဇာအောင်တစ်ယောက် အဆောင်မပြန်ဖြစ်ဘဲ မသီရိမြတ်အိမ်မှာ အိပ်ဖန်စောင့်ဖို့ ဖြစ်သွားသည်။ ဦးအောင်မောင်းကိုတော့ ဒီနေ့သူအရေးကြီး ကိစ္စလေးရှိလို့ မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းဖုန်းဆက်ပြီး အားနာနာနဲ့ပဲ ပြောလိုက်ရတာပေါ့လေ။ “ငါ့မောင် ရေချိုးမယ်ဆိုရေချိုးခန်းက အောက်ထပ် ဘယ်ဘက်ထောင့်ကအခန်းနော်… အမတော့ အရင်ချိုးနှင့်ပြီ…” မသီရိမြတ်ကရေချိုးခန်းဘက်သို့ ထမီတစ်ထည်ကို ကိုင်ပြီးထွက်သွားသည်… တေဇာအောင်ကား အောက်ထပ်မှာ တီဗွီကြည့်ပြီး ကျန်ခဲ့သည်။
ရေချိုးခန်းထဲသို့ ထမီရင်လျားနှင့်ဝင်သွားသော မသီရိမြတ်၏ ကိုယ်လုံးအလှကိုကြည့်ရင်း သူ့စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်လာသလိုလိုပင်..။ မသီရိမြတ်နဲ့ သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပါလား… ဒီအိမ်မှာက။ မသီရိမြတ်ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး တံခါးပိတ်သံကြားလိုက်တာနဲ့ သူ့ခြေလှမ်းတွေက အလိုလို.. မသီရိမြတ်ဝင်သွားသော ရေချိုးခန်းဆီသို့..။ သီရိမြတ်ကလည်းသိသည်.. တေဇာအောင် သူမရေချိုးတာကို ချောင်းစေချင်သဖြင့် ဒီလို ဂွင်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လိုက်ပြီးတံခါးကို ချက်မထိုးပဲထားလိုက်သည်။ တေဇာအောင်ကား ဒါကိုမသိ…။ သီရိမြတ်က ရေချိုးခန်းထဲက ရေပန်းကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ရေတွေက ကိုယ်လုံးကိုစိုသွားသည်။ သူမထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး ကိုယ်လုံးတီး အနေအထားဖြစ်သွားပြီ။ အပြင်မှ ချောင်းကြည့်နေသော တေဇာအောင်က သူစိတ်ကူးဖြင့် ပစ်မှားနေသော မသီရိမြတ်၏ ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားကို အရှင်လတ်လတ် မြင်လိုက်ရသဖြင့် သူ့ရင်တွေ တလှပ်လှပ် တုန်သွားသည်။ သူ့ငပဲကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး အရေကြည်တွေပင် ထွက်လာသည်။ ရေချိုးခန်းထဲကို ပြေးဝင်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာသည်။ မသီရိမြတ်ကား ကလေးအမေသာဆိုတယ်… အိုးကြီးကလည်း တင်းကားနေသည်။ ရေစိုနေသော ဆံပင်တွေက သူမနို့နှစ်နှစ်လုံးပေါ်ဝဲကျနေတာ ကြည့်လို့ကိုကောင်းသည်။ နို့တင်းဆေးတွေ လိမ်းသည်ထင်သည် တင်းရင်းနေတာပဲ။
ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး သန့်ရှင်းနေသော မသီရိမြတ်၏ အဖုတ်ကြီးကလည်း ဖောင်းကားနေတာပဲ။ မသီရိမြတ် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖင်ကြိးတွေ တုန်တုန်နေတာကိုပင် သူဖီးလ်တွေတက်လာရင်း သူ့လက်က သူကလီးပေါ် အလိုလိုရောက်သွားသည် ..။ အား..မသီရိမြတ်ရယ်.. သူဂွမ်းထုရင်း ညဉ်းလိုက်သော စကားပါသီရိမြတ်ကား တေဇာတစ်ယောက် သူမကိုယ်လုံးတီးအလှကို ကြည့်ရင်း မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိသည်…။ သီရိမြတ်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ဆပ်ပြာကို လွတ်ချလိုက်သည်…ဆပ်ပြာကို ခြေထောက်နှင့် မသိမသာတိုက်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးအနီး ပို့လိုက်သည်. တေဇာအောင်ကား ရေချိုးခန်းထဲမှ… မသီရိမြတ် ဆပ်ပြာလိုက်ကောက်ရင်း ကုန်းကုန်းကွကွ ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီး သူ့လီးကို ဆွနေသော လက်တွေကပိုမြန်လာသည်။ ဗြုန်းဆိုရေချိုးခန်းတံခါးက ပွင့်သွားသဖြင့် ဒုန်းခနဲ ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီး လန့်ဖြတ်သွားသည်။ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ…။ သူကလည်း အောက်ပိုင်းပုဆိုးမရှိ လက်ကလီးကို ကိုင်လျှက် တန်းလန်းကြီး ရေချိုးခန်းရှေ့မှာ မသီရိမြတ်က မျက်နှာထားကို တင်းနေသည်…။ “တေဇာ..ငါ့မှာတော့နင့်ကို ငါ့မောင်လို သဘောထားလိုက်ရတာ.. နင်က ငါရေချိုးတာကို ချောင်းပြီး ပစ်မှားနေတယ်ပေါ့…” “ဟိုဟို…” တေဇာအောင်ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိ.. ခုနက စိတ်တွေလည်းဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။
မျက်နှာကို ပူနေသည်.. တစ်ကိုယ်လုံးလည်း အပြစ်လုပ်မိသူမို့ တုန်နေသည်။ မသီရိမြတ်က.. သဘက်ကြီးကိုယူကာ သူမကိုယ်လုံးကိုပတ်လိုက်ပြီး “လာစမ်း..တေဇာအောင်…မင်းဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် မင်းကိုဒဏ်ပေးရမယ်…” တေဇာအောင်လီးတံကြီးကို သီရိမြတ်က လက်ဖြင့် ဖမ်းဆုပ်ကာညှစ်လိုက်ပြီး အခန်းထဲမှ ထွက်လိုက်သည်။ တေဇာအောင်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ဆွဲခေါ်သွားသဖြင့် တေဇာအောင်လည်း လီးတန်းလန်းနဲ့ သီရိမြတ်ဆွဲခေါ်ရာနောက်သို့ ပါသွားလေတော့သည်။ သီရိမြတ်က သူမအခန်းထဲသို့ တေဇာအောင်လီးကိုကိုင်ကာ ခေါ်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ တေဇာအောင်ကို တွန်းလှဲလိုက်လေတော့သည်။ “မင်းအကျီကိုချွတ်လိုက်..တေဇာအောင်..” လေသံမာမာဖြင့် သီရိမြတ်ကပြောလိုက်သည်။ တေဇာအောင်လည်း ခုနကသူဂွမ်းခိုးတိုက်တာ မိသွားသဖြင့် သီရိမြတ်အလိုကျ အကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ သီရိမြတ်စိတ်ထဲကတော ရီချင်နေသည်။ တေဇာအောင်က ကြောက်နေလို့လေ။ သူမအနေနဲ့တော့ တေဇာအောင်ဆိုတဲ့ လူပျိုလေးရဲ့ အသွေးအသားတွေကို ကောင်းကောင်းမြည်းခွင့်ရတော့မှာမို့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းပျော်နေသည်။ သူမက အပေါ်မှာပတ်ထားသော သဘက်ကို ဖြုတ်ချလိုက်သည်။ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားသော သူမအလှကိုကြည့်ပြီး တေဇာအောင်လီးကြီးက သူမအကြိုက်မာထောင်နေပြီ။ သူမအနေဖြင့် တေဇာအောင်ကို နည်းနည်းညဉ်းပြီး လိုးချင်စိတ်တွေ မတရားပြင်းထန်အောင်လုပ်မှ ထင်တယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်ပြီး အ၀တ်ဘီရိုဆီသို့ လျှောက်သွားလိုက်သည်။
ပြီးတာနဲ့ သူမရှာလိုက်သည်။ တစ်လောက အိမ်ထဲမှာ အ၀တ်လှမ်းရန်အတွက် ၀ယ်ထားတော ကြိုးတွေရှိနေသည်။ ကြိုးကိုယူပြီး ကုတင်ဆီကို လျှောက်လာသည်။ ပြီးနောက် တေဇာအောင် လက်တွေကို ဆွဲယူပြီး ကုတင်တိုင်တွေမှာ ကပ်ပြီးကြိုးနဲ့ ချည်လိုက်သည်။ တေဇာအောင်ကား မသီရိမြတ်ရဲ့ အလှတွေမှာ မိန်းမူးပြီး သီရိမြတ်လုပ်တာကို မငြင်းမိပဲ ဆေးမိနေသောသူလို မသီရိမြတ်လုပ်သမျှ ခံနေမိသည်။ သီရိမြတ်က သူမစိတ်တိုင်းကျ တေဇာအောင်ကို တုပ်လိုက်ပြီး ပက်လက်အနေအထားဖြစ်နေသော တေဇာအောင်အပေါ် ရင်ဘတ်ပေါ်သူမမျက်နှာကို အပ်ချလိုက်သည်။ တေဇာအောင်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ “အိုး…အား..” တေဇာအောင်ကား နတ်ပြည်ရောက်သလို ဖြစ်သွားသည်..။ ရမ္မက်စိတ်တွေလည်း ပိုပြင်းထန်လာပြီ လီးကြီးကို ကောကော့လာသည်။ သီရိမြတ်က တေဇာအောင် နို့သီးလေးတွေကို သွားဖြင့် အနည်းငယ် ကိုက်ပေးလိုက်သည်။ မနာအောင်ပေါ့.. “အင်း..အား…” တေဇာအောင်ကားလူးနေပြီ… လီးထိပ်ကကို အရည်တစ်စက်စက်ထွက်နေပြီ.. “မမ ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူး…အားဟား…” “ခ်ခ်…” သီရိမြတ်ကား အရမ်းကိုသဘောကျနေသည်။ တေဇာအောင်ကား ခံနိုင်ရည်ကိုမရှိတော့.. မသီရိမြတ်က သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ဆင်းကာ သူ့ချက်အပေါက်လေးကို လျှာနဲ့ကလိနေတာကိုး…ယားယံမှုကြောင့် သူ့တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်တွန့်လူးနေပြီ … ။
အရင်ကသူလိုးခဲ့သော ဆော်တွေနှင့် ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုး တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့။ သူကကြီး အထက်စီးကနေခဲ့တာ.. မသီရိမြတ်နှင့်မှ ခံနေရသည်။ လက်တွေကိုလည်း မသီရိမြတ်က ကုတင်တိုင်တွေမှာ ကြိုးနဲ့ ပူးချည်ထားသဖြင့် သူမလုပ်သမျှ ဘာမှမလှန်နိုင်ပဲ ခံနေရသည်။ ကြည့်နေရင်း သီရိမြတ်က သူ့အပေါ်မှ တက်ခွလိုက်သဖြင့် သူ့ခေါင်းကသီရိမြတ်၏ ပေါင်တံဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကြားတွင်ရောက်နေပြီ။ သီရိမြတ်ကာ တေဇာအောင်မျက်နှာပေါ်တွင် ခွလိုက်ချိန်တွင် တေဇာအောင် သဘောပေါက်သွားသည်။ သီရိမြတ်၏ လက်ဖဝါးအိအိလေးကြားတွင် တေဇာအောင်ရဲ့လီးတံကြီးကိုလိမ့်ပြီး ကစားပေးလိုက်သည်။ တေဇာအောင် မျက်နှာနှင့် သီရိမြတ်အဖုတ်လှလှလေးကနီးနေပြီ။ အဖုတ်လေးက သူ့မျက်နှာပေါ်ခွထိုင်ထားသဖြင့် အဖုတ်ညိုတိုတိုလေး၏့နှုတ်ခမ်းတွန့်တွန့်လေးက ပွင့်ဟနေပြီး အထဲမှ ပန်းရောင် စောက်ပတ်အသားပြင်လေးကို မြင်နေရသလို အဆိုပါ အသားပြင်လေးအောက်မှ ပြူထွက်နေသည့် အရည်များလက်နေသည့် စောက်စိလေးကိုလည်း မြင်နေရသည်။ လီးကို အဆွခံရသဖြင့် ဖီးလ်တက်နေသော တေဇာအောင်ကား မသီရိမြတ်၏ အဖုတ်ထဲကို သက်သာလိုသက်သာငြား လျှာဖြင့် တပြတ်ပြတ် ယက်လိုက်ချိန်တွင် သီရိမြတ်ဖင်ကြီးကို ကော့တက်သွားသည်။
သူမကလည်း တေဇာအောင်ပေါင်ကြားကို ခေါင်းငုံ့လိုက်ပြီး တယမ်းယမ်းဖြစ်နေသော လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်မွာကြား အသာအယာထဲ့ကာ ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်လိုက်ပြီး ကောင်းကောင်းလွေတော့သည်။ “အင်းအင်..ရှီး..အိုးအိုး…မမ…” “အအ..အင်း.အင်း.. မောင်…” တေဇာအောင်နှင့် သီရိမြတ်တို့၏ ပလွေနှင့်ဘာဂျာ အပြိုင်အဆိုင်မှုတ်သံကား အခန်းထဲတွင် တပြွတ်ပြွတ်.. တပြတ်ပြတ်…ထွက်ပေါ်လာသလို… ရမ္မက်လွှမ်းခြုံသော အသံတဟင်းဟင်းများကလည်း အခန်းထဲ ထွက်ပေါ်လာလေတော့သည်။ တေဇာအောင်ကား ပေါင်တံကြိးများ တွန့်တွန့်သွားကာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့် သီရိမြတ်ပါးစပ်ထဲကို သူ့လရေများကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သီရိမြတ်ကား တေဇာအောင်လီးထပ်မှာ ပန်းထွက်သော လရေများကို မြိုချလိုက်သည်။ သူမစောက်စိကို တေဇာအောင်က လျှာဖြင့် ကစားနေသဖြင့်… သူမလည်းမခံနိုင်တော့ သူမစောက်ရည်ဖြူဖြူလေးများက တေဇာအောင် ပါးစပ်ထဲမှာ လျှံကျသွားသည်။ တေဇာအောင်က ထွေးထုပ်မည်ပြုသဖြင့်.. “မထွေးနဲ့နော်မောင်..မြိုချလိုက်” ဟုဆိုပြီး…။ တေဇာအောင်နှုတ်ခမ်းကို သူမနှုတ်ခမ်းနှင့် တေ့စုပ်လိုက်ပြီး ပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် စောက်ရည်များ တေဇာအောင်အား ဖြည်းဖြည်းချင်းမြိုချစေသည်။ ဖြူပြစ်ပြစ် ငံကျိကျိစောက်ရည်များကား သူမပါးစပ်ထဲသို့ ၀င်လာသဖြင့် သူမပင်နည်းနည်းအီသွားသည်။
တေဇာအောင်ကား နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ထားသဖြင့် မသီရိမြတ်၏စောက်ရည်များကသူ့လည်ချောင်း အတိုင်းကျဆင်းကုန်တော့သည်။ သီရိမြတ်က မောဟိုက်သောလေသံဖြင့်…။ “ကြိုက်ရဲ့လားမောင်…” တေဇာအောင်ကားပြန်မဖြေနိုင်။ နင်နေတာကိုး။ “နောက်ဆို ကြိုက်သွားမှာပါမောင်ရဲ့ခ်ခ်” သီရိမြတ်က တေဇာအောင်လီးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် တေ့ကာလွေလိုက်သော အခါ တေဇာအောင် လီးကြီးကား အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနှင့် နဂါးတစ်ကောင်လို မာန်ဖီလာသည်။ သီရိမြတ်အကြိုက်ပင်။ လီးက ခြောက်လက်မခန့် ရှိပြီး ကျပ်လုံးခန့်တုတ်သည်။ သီရိမြတ်က တေဇာအောင်လီးကိုကိုင်ပြီး သူမအဖုတ်နှင့် တေ့လိုက်သည်။ လီးကကြီးသဖြင့် သူမအဖုတ်ထဲသို့ ဖိပြီးထည့်လိုက်ချိန်တွင် ကြပ်တင်းနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထိုင်လိုက်သည်။ တေဇာအောင်၏ လီးကြီးက သူမအဖုတ်ကို ထိုးခွဲကာ အသားပြင်နံရံများကို ပွတ်တိုက်သွားတာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် တေဇာအောင် လီးတစ်ဆုံးထိ ၀င်သွားချိန်တွင် ဖင်ကြီးကို ရှုံ့ပြီးညှစ်ထားလိုက်တယ်။ တေဇာအောင်ကား လီးကိုအညှစ်ခံထားရသလိုဖြစ်တာကြောင့် မျက်ဖြူပင်လှန်ချင်သွားတယ်။ “အင်း..အင်း..မမ..” တေဇာအောင်ကား သူမကိုစွဲသွားပြီမှန်း သိလိုက်ရသဖြင့် သီရိမြတ်ကျေနပ်သွားသည်။ တေဇာအောင်လီးကို သူမအဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ တေဇာအောင်ကား လီးက မသီရိမြတ်အဖုတ်ထဲမှ ထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရသဖြင့် ဟတ်ကော့ကြီးဖြစ်သွားသည်။
“ဟင်…အို..မလုပ်ပါနဲ့..မမတောင်းပန်ပါတယ်..” တေဇာအောင်ကား လိုးချင်လွန်းသဖြင့် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ “ခ်ခ်… ဒါဆိုနောက်နေ့ကစပြိး မင်းမမရဲ့ လင်ငယ်ဖြစ်သွားပြီ.. မမခေါ်တဲ့အချိန် မငြင်းပဲ လာရမယ်” “မမရယ်..လုပ်ပေးပါတော့….မမသဘောအတိုင်းပါ.” “ဟင်းဟင်း…ဒီလိုမှပေါ့ကွ.ကောင်လေးရဲ့.” သီရိမြတ်က သူမအဖုတ်ကို တေဇာအောင်လီးနှင့် ပြန်တေ့လိုက်ပြီး သူမစိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်တော့သည်။ “ဖွတ်ဖွတ်..ရှီးရှိး…အားအား…အင်းအင်း” “စွပ်..ဗြွတ်..ဘတ်..ဘတ်..” “အိုးအိုး..” လီးနှင့်စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်ကြည်လေးများ လိုက်လာပြီဖြစ်သဖြင့် လီးကို သီရိမြတ်စောက်ပတ်နှင့် ဆောင့်ဆောင့်လိုက်တိုင်း တစွပ်စွပ်အသံများက ထွက်နေသည်။ သီရိမြတ်က တေဇာအောင်ရဲ့ လီးကြီးအရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားနေသလို… တေဇာအောင်ကလည်း သီရိမြတ်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကနေ သူ့လီးကိုနှုတ်ခံရမှာ စိုးရိမ်နေပါတယ်။ သူကလည်း ခါးကိုကော့ကော့ပြီး သူ့လီးကိုထည့်ပါတယ်။ သီရိမြတ်က သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်ပြီး သူ့ကို ဖိလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဖင်ကိုဝိုက်ဝိုက်ပြီး သူ့လီးကို သူမအဖုတ်ထဲမှာ စကောဝိုင်းလှည့်သလို ဖိကျိတ်ပြီးမွေပေးပါတယ်။ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် တေဇာအောင် မျက်လုံးကြီးတွေက မှေးစင်းနေပါတယ်။ သီရိမြတ်လည်း ပြန်ကာ သွက်သွက်လက်လက်ဆောင့်လိုက်ပါတယ်။”ရှီးရှိး…အား” တေဇာအောင် လီးထဲကအရည်တွေ သူမစောက်ခေါင်းထဲကို ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ချိန်မှာ သူမအဖုတ်ထဲကလည်း ဖျဉ်းခနဲဖြစ်သွားပြီး စောက်ရည်တွေ ထွက်ကျသွားကာ တေဇာအောင်ပေါ် မှောက်ခုံကြီးကျသွားပါတော့တယ်။ တေဇာအောင်ကား ထိုနေ့မှစ၍ တစ်ရုံးတည်းနေသော မမသီရိမြတ်၏ လင်ငယ်ဘ၀သို့ရောက်ရှိသွားသည်။
သီရိမြတ်ကလည်း ထိုနေ့က တေဇာအောင်နှင့်သူမဖြစ်ပျက်သမျှကို ဗွီဒီယိုကင်မရာဖြင့် ရိုက်ထားသဖြင့် သီရိမြတ်လိုသလို အသုံးချလို့ရသွားသည်။တေဇာအောင်ကား ယခင်ကပွေခဲ့သမျှ မသီရိမြတ်လို အိမ်ထောင်သည် ကလေးအမေနှင့်မှခံရသည်။ သီရိမြတ် အလိုကျ သူမခေါ်လျှင် သွားသွားလိုးပေးရသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ရုံးပိတ်ရက်တွင် သူ့လီးများ ကျဉ်နေအောင်ကို ခံရသည်။သီရိမြတ်က သူ့အခန်းကို လိုက်လာပြီး သူ့ကုတင်ပေါ်မှာ သူ့ကို ကုတင်မှာ ခြေလက်တွေကြိုးနဲ့ပူးချည်ပြီး အားရပါးရ သူမလိုသလို ချတာကိုခံနေရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မလိုးနိုင်သောနေ့များတွင် သူမအခန်းထဲခေါ်ပြီး သူမအာပတ်ကိုဖြေခိုင်းသည်။ တေဇာအောင်ကို ဘာဂျာမှုတ်ခိုင်းတာလေ။ တေဇာအောင်ကား မငြင်းနိုင်ပဲလုပ်ပေးရသည်။ အဲ.. ကံဆိုးချင်တာလားတော့မသိ… တစ်နေ့ ရုံးပိတ်ရက်မှာဖြစ်သည်။ သူ့အခန်းထဲမှာ… သီရိမြတ်က သူ့ကိုဖိုက်နေချိန် ဦးအောင်မောင်းဇနီး ဒေါ်ရိုစီနှင့် ဖြိုးဖြိုးလှိုင်တို့နှစ်ယောက်က နှစ်ယောက်အတူ သူ့အဆောင်လာလည်တာနဲ့ ပက်ပင်းမိသည်။ ထိုမှစပြီး ဒေါ်ရိုစီနှင့် ဖြိုးဖြိုးလှိုင်တို့ကလည်း သူ့ကို အသုံးချတော့သည်။ တေဇာအောင်အနေဖြင့် ထိုအိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမသုံးယောက်ကို အားရှိသော အစာများစားကာ နေ့တိုင်းဒိုင်ခံလိုးပေးရတော့သည်။ သုံးယောက်တစ်ယောက် နေ့တိုင်းသူ့အခန်းမှာ။ သူ့အနေဖြင့် ရမ္မက်ရေယာဉ်ကြောမှာ မမျှောချင်ဘဲ မျှောနေရတော့သည်။ (တကယ်တော့ တံခါးတစ်ချပ်ဆိုတာ စေ့ထားတာထက် ပိတ်ထားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ စေ့ထားတဲ့ တံခါးဆိုတာ အချိန်မရွေး တွန်းဖွင့်ခွင့်ပေးထားသလိုပါပဲ။ ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ လောကကြီးမှာ တေဇာအောင်လို လူမျိုးတွေကတော့ အမြဲတမ်း ရှိနေဦးမှာပဲလေ။) ပြီးပါပြီ။
လွန်ခဲ့သော ၃လခန့်က ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးသန့်စင် ရွာသို့ ပြန်ပြီး ကထိန်ခင်းရာ လိုက်ပါ သွားခဲ့ရ ၏။ သားဖြစ်သူ ဇင်အောင်နှင့် သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်း တို့မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် မဆုံသဖြင့် အိမ်မှာပဲ နေခဲ့ ကြသည်။ ဦးသန့်ဇင်တို့ လင်မယားမှာ တာက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသော ဖိုးလုံးအား ခေါ်ကာ ကထိန်ခင်း သွားခဲ့ကြ၏။ဖိုးလုံးပင် ဖိုးလုံးမှာ အသားမဲမဲ အရပ်ပုကာ ကိုယ်လုံး ခပ်ပြတ်ပြတ် နှင့် အသက် ၂၁ နှစ်ထဲ ရောက်ရှိနေ၏။ ဖိုးလုံးမှာလည်း ရွာသို့ ခဏ ပြန်လိုက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် တလမ်းလုံး ပျော်ရွှင် နေသည်။ ရွာရောက်သည့်နေ့ ဦးသန့်ဇင်မှာ ငယ် သူငယ်ချင်းများနှင့် သောက်ရင်း စားရင်း ညပိုင်း ထမင်းပင် […]
ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်က ရဲလွန်း ။ ရဲလွန်းသည် ဆင်းရဲတွင်း နက်တဲ့ အခြေခံ လူတန်းစား မိသားစုထဲမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ။ အဖေက စက်ရုံတရုံက အလုပ်သမား ။ အမေက ဈေးရောင်းသည် ။ တဦးတည်းသော သား ငဆိုးလေး ။ ပိန်ပါးလို့ အရပ်မြင့်တယ်လို့ ပို ထင်ရသည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက အစားထက် ကစားကို ပိုမက်နေခဲ့တာမို့ရယ်..မရှိဆင်းရဲသား နင်းပြား ဘ၀တွေမို့ မစားနိုင်တာရယ်ကြောင့် ရဲလွန်းသည် ပြားချပ်ချပ် ပိန်ကပ်ကပ်ကလေး ။ အသက်၁၉နှစ် ကောင်လေး ။ ဆံပင်က ရှည်သည် ။ လိန်ကောက်နေတဲ့ ဆံပင်နီကြောင်ကြောင်တွေက ပုခုံးအထိ ရှည်သည် ။ လက်ကြော […]
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်အမေရဲ့အကို ကျနော့်ဦးလေးပေါ့။ နာမည်က ဦးခိုင်သိန်း။ သူ့မိန်းမက ငယ်ငယ်လေးဗျ။ ဦးလေးအသက်က ၄၅လောက်ရှိပြီ။ ဦးလေးမိန်းမနာမည်က မသက်သက်တဲ့။ အသက်က ၃၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ ဇာက်လမ်းအစကတော့ ကျနော်ဦးလေးက ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်တယ်။ သားသမီးသာ မရှိသေးတာ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းတယ်။ ဦးလေးက ကျနော်ကလည်း ဦးလေးမိန်းမကို တခါတခါ ဦးလေးမိန်းမကို ခိုးခိုးပြီး နို့တွေဖင်တွေကို ကြည့်တတ်တာကို ယောကျာ်းသာရှိတာ ဖင်တွေ ရင်တွေက အော်ဒီဂျင်နယ်ပဲလေ။ ကျနော်က ကျောင်းပိတ်ရက်ကလည်း ဖြစ်နေတော့ အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ညနေ ၅နာရီလောက် ကျတော့ဦးလေးရောက်လာတယ်။ ဦးလေးက ကုန်ဝယ်သွာဖို့ ကျနော့်ကို သူ့အိမ်ဖက်ကြည့်ပေးထားဖို့ မှာခဲ့တယ်လေ။ ဒီကလည်း အဆင်သင့်ပေါ့ဗျာ။ “ဟုတျ့ကဲ့” ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ ညနေထမင်းစားပြီး ဦးလေးတို့အိမ်ဖက် လျှောက်လာလိုက်တယ်။ […]